जिल्ला तहमा कांग्रेसको महाधिवेशन रौनक – Dainik Lumbini
जिल्ला तहमा कांग्रेसको महाधिवेशन रौनक
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन मिति नजिकिंदै जाँदा जिल्ला तहमा पनि त्यसको सरगर्मी सुरु भएको छ । गुटगत रूपमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारका लागि नेताहरूको नाम बाहिर आउन थालेसँगै पश्चिम नवलपरासीमा पनि गुटगत रूपमै सभापतिको नाम सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
जिल्ला तहमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एंव केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल र संविधानसभा सदस्य विक्रम खनालको २ गुट छ । खुमबहादुर खड्काका निकट मानिने कँडेल खड्काको निधनपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट छन् । विगतमा देउवा निकट नै मानिने नेता खनाल भने जिल्लामा कँडेलका विरोधी हुन् । महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा अहिले भने खनालले गुटबारे खुलाउन चाहेनन् । केन्द्रमा उम्मेदवार तय भएपछि मात्र खुल्ने उनको भनाइ छ । खनाल गुटका नेताहरूले भेला नै गरेर खनाललाई उम्मेदवारमा समर्थन गरेको हो । जिल्ला टुक्रिएपछि लामो समय कार्यबहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका प्रस्तावित सभापतिका उम्मेदवार खनाल वर्तमान जिल्ला उपसभापति हुन । खनाललाई सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा समर्थन गर्न बसेको भेलामा २ वटै निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सभापति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरू थिए ।
त्यसैगरी भेलामा संविधानसभा सदस्यद्धय खनाल, देवकरण जयसवाल, संघीय सभापतिसमेत रहेका रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ता, सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापा, विश्वप्रकाश पाठकलगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो । कँडेल गुटले भने सभापतिको उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । गुट विवादकै कारण महाधिवेशनका लागि जिल्लाबाट पठाइएको क्रियाशिल सदस्यतामा पनि दुबै पक्षले केन्द्रमा उजुरी दिएका छन् । जिल्लाबाट नयाँ र पुराना गरी ९ हजार बढीको क्रियाशिल सदस्यता पठाइएको पार्टी सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सदस्यताबारे केन्द्रमा उजुरी परेको उनले बताए ।
नवलपुरमा सभापतिमा ६ जनाको नाम चर्चामा
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीमा पनि नेपाली काँग्रेसको जिल्ला सभापतिको रूपमा ६ जनाको नाम चर्चामा रहेको छ ।
शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र डा. शशांक कोइराला लाइनका गरी ३ लाइन रहेको नवलपुर काँग्रेसमा ३ वटै लाइनका प्रत्यासीहरूको चर्चा सुरु भएको छ । यस अघि एउटै जिल्ला हुँदा पौडेल लाइनका महेन्द्रध्वज जिसीलाई तत्काल जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले झिनो मत अन्तरले पराजित गरेका थिए ।
त्यसो त अहिले पनि अन्तिममा विष्णु लामिछाने र महेन्द्रध्वज जिसीबीच प्रतिप्रर्धा हुने सम्भावना प्रवल रहे पनि अहिले हालका सभापति विष्णु लामिछाने, हालका सचिव बालकृष्ण घिमिरे, सभापतिमा पराजित भएका महेन्द्रध्वज जिसी, विष्णु कार्की, मदनभक्त अधिकारी र गजेन्द्र आलेको नाम चर्चामा रहेको छ । तथापि यि सबैले व्यक्तिगत भेटघाट बढाएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी नै घोषणा भने गरेका छैनन् । तथापि जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले आफ्नो दाबी जिल्ला सभापतिमा भन्दा पनि प्रदेश महामन्त्रीमा रहेको बताए । महेन्द्रध्वज जिसी पौडेल लाइनका हुन् । त्यसैगरी विष्णु कार्की, मदनभक्त अधिकारी र गजेन्द्र आले देउवा निकट मानिन्छन् भने विष्णु लामिछाने र बालकृष्ण घिमिरे डा. कोइराला निकट मानिन्छन् ।
जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको बताए । काँग्रेसको महाधिवेशन आउँदो भदौ १६ देखि १९ गते तोकिएको छ । साउन १२ गते वडा अधिवेशन र साउन २६ मा जिल्ला अधिवेशन तोकिएको छ । क्रियाशिल सदस्यको आधारमा वडा अधिवेशनबाट चुनिने क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरूले जिल्ला सभापतिसहितको नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान छ ।
जिल्लाबाट पुरानो ८ हजार सहित १६ हजार ५ सय बढीको क्रियाशिल सदस्यता पठाइएको पार्टी सचिव बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
कावासोती नगरसभापतिमा ४ जनाको उम्मेदवारी घोषणा
कावासोती । पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीमा नेपाली काँग्रेसको आगामी नगर सभापतिका लागि ४ जनाले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।
आकांक्षीहरू थुप्रै रहे पनि नगरसभापतिमा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष देखिने गरी ४ जनाले घोषणा गरेका हुन् ।
कावासोतीको नगर सभापतिमा कावासोती ३ का वडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठ, विद्यार्थी नेता रामचन्द्र भट्टराई, व्यवसायी सालिकराम ढकाल र रामचन्द्र भण्डारीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसको साउन १२ गते गाउँ तथा नगरको वडा अधिवेशन हुँदै छ भने साउन १६ गते गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिवेशन हुने भएको छ ।
प्रदेशभर २० हजार क्वारेन्टाइनमा
क्वारेन्टाइन अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो
‘तीन वर्षमा विकास निर्माणका आधार तय’